အမြင် နဲ့ ဆုံးဖြတ်ရင် ဒူးရင်းသီးတောင်စား မယ့် သူ ရှိမှာ မဟုတ်ဘူး. လို့ ရှင်ယွန်းမြတ်ပြောပြီ – Shwe Yoe
အမြင် နဲ့ ဆုံးဖြတ်ရင် ဒူးရင်းသီးတောင်စား မယ့် သူ ရှိမှာ မဟုတ်ဘူး. လို့ ရှင်ယွန်းမြတ်ပြောပြီ
social media လောကမှာ နာမည်တစ်လုံးနဲ့ ရပ်တည်နေသူ တစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့ ဆက်ဆီ ကျပြီး အမိုက်စားပုံတွေနဲ့ ညို့အားပြင်းပြင်း ဆွဲဆောင်နိုင်သူလေး ဖြစ်တာကြောင့် လက်ရှိဖေ့ဘွတ်စာမျက်နှာမှာ ရေပန်းစားလူကြိုက်များကာ ပုရိသတွေ ဝန်းရံနေ ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ သူမရဲ့ အမိုက်စားပုံရိပ်တွေကို လူမှုကွန်ယက်ဖေ့ဘွတ်ပေါ်တွင် အများဆုံး တင်လေ့ရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ လတ် တလောမှာတော့ ဆွဲဆောင်မှုရှိရှိနဲ့ လှရက်လွန်းနေတဲ့ GYM က အမိုက်စား ပုံလေးတွေကို ဖော်ပြထား တာတွေ့ရပါတယ်။